Ukubaluleka koyilo lwegraphic kwintengiso | Abadali be-Intanethi
Ukubaluleka koyilo lwegraphic kwintengiso
Izidalwa ezikwi-Intanethi | | Ezahlukeneyo
Kwindalo yonke yentengiso, uyilo lomzobo lunokubaluleka okukhulu, kuba ngumfanekiso weprojekthi, indawo ebonakalayo kunye neyobuhle engena ngamehlo. Ukongeza, uyilo lomzobo luyinxalenye yokuthengisa ehamba phambili kwaye eya kuqhubeka ikhula kwixesha elizayo kuba idityaniswe kwi-Intanethi, ukuthengiswa kwedijithali kunye nobuchwepheshe.
Ukuba ujonge ukuqeqesha kweli candelo, kunye ne intengiso fp Unokufunda yonke into oyifunayo, ukongeza ekwenzeni i-internship kwiinkampani ezikweli candelo.
1 Yintoni uyilo lwegraphic?
2 Uyilo lwegraphic kwiinkampani
3 Izakhono zomyili wegraphic
Ukuqala, kubalulekile ukwazi ukuba yintoni uyilo lwegraphic kwaye luvela phi. Ngoku ka I-AIGA (I-American Institute of Graphic Design), inokuchazwa ngokuthi "ubugcisa kunye nokusebenza kokucwangcisa kunye nokubonisa iingcamango kunye namava kunye nomxholo obonakalayo kunye nombhalo". Uyilo lwegraphic yiyo yonke into ehambisa umyalezo obonakalayo, ngokuchwetheza, umfanekiso, umbala kunye nezinto eziphathekayo.
Uyilo lwegraphic yavela ekupheleni kwenkulungwane ye-XNUMX eYurophu ngenxa yeenguqu ezinzulu ezivelayo ngenxa yenguqu kwezoshishino. Izixeko ziqala ukukhula kwaye ziphuhlise unxibelelwano olungcono, ezothutho ezingcono kunye nophuhliso oluqhubekayo kubuchwepheshe. Ukusuka apho, iYurophu ifuna isimbo sayo esimele amaxesha amatsha kwaye yileyo ndlela i-modernism izalwa ngayo. Emva koko kwafika iSikolo saseBauhaus eJamani kunye ne-Art Deco eFransi. NakwiMfazwe yokuQala neyesiBini yeHlabathi, uyilo lomzobo lwalubaluleke kakhulu eNtshona.
Namhlanje uyilo lomzobo luye lwavela kwakuyidijithali. Ukutshintsha ukusuka ephepheni ukuya kwesikrini kuthetha ukuba uyilo lomzobo lunokuhanjiswa ngokufanelekileyo. Kwakhona kubangele utshintsho kwindlela yokunxibelelana ngokubhaliweyo okanye imifanekiso ngaphakathi koyilo.
Uyilo lomzobo ayilobuhle nje bobuhle. Ikhuthaza isazisi, inika ubuntu, ivelisa izinto ezintsha, ibangela umahluko ngokubhekiselele kukhuphiswano okanye ibonisa amaxabiso emveliso okanye uphawu.
Uyilo lwegraphic kwiinkampani
Iinkampani zikhangela ngakumbi abayili bemizobo, nokuba benze amaphepha abo ewebhu abe lula kwaye abe nomtsalane ngakumbi kubathengi, ukwenza iinethiwekhi zabo zentlalo zibukeke zinobuchule ngakumbi okanye ukwenza unxibelelwano lwabo lusebenze ngakumbi.
Ukuba kukho uyilo olulungileyo olusetyenziweyo, inkampani inokuba nezibonelelo ezininzi, ezinje:
Ukunyuka kweentengiso. Ngoyilo olubonisa ngokucacileyo amaxabiso afunwa yinkampani, umthengi onxulumene namaxabiso akho uya kuyiyela le mveliso endaweni yokukhetha ukhuphiswano olungagqithisi nto.
Ukumisa. Yonke i-brand ephumelelayo inethoni yayo okanye ubuntu bayo. Iibrendi ezaziwa kakhulu kwihlabathi zinokuchongwa ngezinye izinto ezininzi ngaphandle kwamagama azo. Ngokomzekelo, i-Coca-Cola ilungelelanise umbala obomvu, okanye i-Adidas inokuchongwa ngoko nangoko ukuba ubona imivimbo emithathu ye-perpendicular.
Ukweyisela. Ukukholisa eyona njongo iphambili yokuthengisa. Yinto ehlala ifunwa kwaye uyilo lwegraphic sisixhobo esihle sokukholisa.
U ku kholosa. Uphawu olunonxibelelwano oluhle kakhulu kunye noyilo olucacileyo luya kuhlala kwi-retina yabathengi. Ukuba bayayikhumbula ibrendi yakho, ekugqibeleni baya kwakha ukuthembela kuyo kuba iya kuba yinto eqhelekileyo kubo.
Ukuvelisa uyilo oluqaphelekayo kwi-brand, kubalulekile ukuba kubekho incwadi yesazisi yenkampani. incwadi ye isazisi Luxwebhu lweshishini apho isazisi esibonakalayo sophawu lubonakaliswa. Isazisi esibonakalayo sinokuba yimibala yeempawu, ilogo, uchwethezo olusetyenzisiweyo, ukwakheka okanye izithintelo kuyilo. Ukuba le ncwadana ayilandelwa, ekugqibeleni uyilo aluyi kulungelelaniswa kunye nesitayela sophawu.
Izakhono zomyili wegraphic
Ngokuphathelele izakhono zomzobo kufuneka abe nazo, kukho izinto ezininzi eziyimfuneko ukuze ube ngumyili olungileyo kunye nengcali yokwenyani: ubuchule bokuyila, ukumamela okusebenzayo, izakhono zobuchwepheshe kunye nokuguquguquka.
La ubuchule Bubuchule bokwahluka. Umntu onobuchule unokudala uyilo olulodwa kunye nexabiso. Ubuchule bokudala bunokuba ngokwemvelo kodwa bunokufundwa. Unokuhlala uvuselela ubuchule ngokuzilolonga, jonga iindlela ezintsha kwaye ujonge imibono emitsha.
La ukumamela ngokukhutheleyo Kubandakanya ukuba novelwano, ukuqonda abathengi kunye nokuqonda umyalezo abafuna ukuwudlulisela. I ubuchule bezobuchwepheshe zizo zonke izixhobo kunye neenkqubo ezinikezelwe kuyilo lwegraphic kwaye kubalulekile ukuzazi kakuhle. Ekugqibeleni, i ukuguquguquka womyili kubalulekile ukwazi ukuziqhelanisa nawo nawuphi na umxholo.
Ke ngoko, sele ubonile ukuba uyilo lwegraphic lubalulekile kwintengiso. Iyinxalenye ebonakalayo, idlulisela iimvakalelo ezininzi, iphucula umfanekiso wenkampani, iguqulelwe ngokupheleleyo kwixesha ledijithali, iinkampani ziyayidinga kwaye ziya kuba yinxalenye yexesha elizayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Ukubaluleka koyilo lwegraphic kwintengiso